Taksiile Jaceylkiisa Ku Badashay Aduun Lacageed oo Gaaraya‏ - Daawo Sawiro. - iftineducation.com
Taksiile Jaceylkiisa Ku Badashay Aduun Lacageed
iftineducation.com – Wiil Soomaaliyeed oo ku dhaqan gudaha Xaafada Islii ee Magalada Nairobi ayaa aduun lacageed oo gaaraya $5000 (Shan kun) oo dolar siistay gabar uu ifka ugu jeclaa sida ay inoo Xaqiijiyeed dad ku dhow wiilkaasi oo aan kula kulanay Magaalada Nairobi.
Wiilkaani oo lagu Magacabo C/Raxman ayaa Sheegay in uu jaceylkiisa ku Badashay aduun kaasi lacageed ka dib markii uu awoodi waayay dhaqaalahi uu ku guursan lahaa gabadhaasi.
Balse Lama ogo sababta rasmiga ah ee ku kaliftay In C/Raxman oo ah wiilka gabartii uu ifka u jeclaa siistay aduunkaasi Lagaceed.
Arintaasi ayaa loo aanayn karaa siyaabo kala duwan oo aay ugu Muhiimsantahay in Dhaqaale la’aan baahsay ay heesatay Wiilkaasi uuna doorbiday in Jaceylkiisa uu isga tanaasulo Maadama usan heysan qarash uu ku maareeyo noloshooda si uu u sameeyo gacansi uu ku maareenayo noloshiisa islamarkaana aysan mar dambe dhicin dhacdadaan Xanuunka badna ee soo wajahday Wiilkaasi.
Sidoo kale wxaa Sabab looga dhigi karaa in dhalinta Soomaaaliyeed, oo aan fahansaneen qiimaha iyo waxaa uu yahay jacelka dhabata ah iyo in frkrada jceyl ay dhalinyarada Qaarkood ay aaminsanyohiin in ay athay mid qaldan .
Si kasta oo aay ahaataba arintaasi ayaa waxaa aay ka fajacisay dhalinyaro fara badan oo ku dhaqan gudaha Magalada Nayroobi ee caasimada dalkaasi Kenya.